जापानमा बस्ने सबैले को’रोनाको खोप निःशुल्क पाउने…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
टोकियो : जापानमा बस्ने सबैलाई सरकारले कोरो’ना भा’इरस विरु’द्धको खो’प निःशुल्क लगाइदिने भएको छ ।दैनिक रुपमा को’रोना भा’इरसबाट सङ्क्र’मितहरु भेटिइरहेका बेला जापानको संसदले बुधबार एउटा कानून नै पारित गरेर सबैलाई निःशुल्क खो’प दिने व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ कानून अनुसार १२ करोड ६० लाख मानिसलाई को’रोना वि’रुद्धको खो’प लगाउनका लागि दुवै सदनबाट बजेट समेत पारित गरिएको छ । सरकारले छ करोड मानिसका लागि औष’धि उत्पादक संस्था फा’इजरबाट खो’प ल्याउने सुनिश्चित गरिसकेको छ भने बाँकी दुई करोड ५० लाख मानिसका लागि अमेरिकी बायो’टेक फर्म मो’डर्नासँग सम्झौ’ता गरेको छ ।
त्यसैगरी १२ करोड मानिसलाई पु’ग्नेगरी अस्ट्रा’जेनिकाको खो’प ल्याउने तयारी भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । फाइ’जर र मोडर्नाले को¥रोना वि’रुद्धको खोप आप’त्कालिन प्रयोगका लागि अमेरिका र युरोपमा यसअघि नै अनुमति मागेका छन् । चिकि’त्सकीय परिक्षणबाट दुवैको खोप प्रभा’वकारी पु|ष्टि भइसकेको छ ।
जापानका प्रधानमन्त्रीले को’रोनाभाइ’रसको महामा’री नियन्त्र’णका लागि सरकार अत्य’धिक संवेदनशील रहेको बताएको दुई हप्तापछि संसदबाट यस्तो कानून पारित भएको हो ।
तु’लनात्मक रुपमा जापानमा को’रोनाभाइ’रसको महामारी कम देखिएको छ । जापानमा कोरोनाका कारण अहिलेसम्म दुई हजार १०० जनाको मृ’त्यु भएको छ भने एक लाख ५० हजार सङ्क्र’मित भएका छन् ।
त्यसैगरी जापानमा अहिले कहिँ पनि अति कडा ल’कडाउन लागू गरेको देखिएको छैन । तर पनि महामा’री अहिले ते’स्रो पटक फैलि’एको हो । सङ्क्र’मितहरु भेटिने क्रम चलिरहेको छ ।
Prevपुलको उद्घा’टन गर्न तनहुँ पुगेका वरिष्ठ नेता पौडेल प्र’हरीको निय’न्त्रणमा ! कारण छ यस्तो भिडियो सहित हेर्नुहोस् ।
Nextवरिष्ठ नेता पौडेल भन्नुहुन्छ : राज’तन्त्र कुनै हालतमा फर्किदैन !
हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरेका एक भारतीय प’क्राउ
ओली समूह प्रवेश गरेको तीन दिन नबित्दै यी नेता फर्किए प्रचण्ड-माधवतिरै ।
नायिका करिष्मा भन्छिन्; ‘क्रिस्चियनले हाम्रो निधारमा लगाउने रातो गौरवको टिकालाइ घृ’णा गर्यो (38)
१.	नायिका करिष्मा भन्छिन्; ‘क्रिस्चियनले हाम्रो निधारमा लगाउने रातो गौरवको टिकालाइ घृ’णा गर्यो (38)
५.	जसले खाटमै पल्टिएर व्यवसाय चलाए, करोडौंको सम्पत्ति कमाए (12)
६.	वाइफाइ कमजोर छ ? अपनाउनुस् यी तरिका (12)
८.	बधाई ! साइप्रसमा पहिलो महिला सभामुख चयन ! (10)